Akasabazi ubuthongo owanikeza umakhelwane ingane yakhe | News24
Akasabazi ubuthongo owanikeza umakhelwane ingane yakhe
Durban - Akasabazi ubuthongo owesifazane ongu-Abongile Nojahi‚ njengoba esehlala ezibuza ukuthi ngabe lukuphi usana lwakhe olunezinyanga ezingu-9 luzelwe, u-Olwethu.
Usana lwakhe sekuphele izinsuku ezinhlanu lwanyamalala.
“Kunzima. Angisalali nasebusuku ngenxa yokukhathazeka, ngizibuza ukuthi ngabe ukuphi,” esho.
UNojahi wanikeza umakhelwane wakhe, uZanele Mchunu, 17, ingane kade ecele ukuhlala nayo ngoMgqibelo.
“Wafika ekhaya wacela ukuboleka ingane yami, ngavuma. Wathi uzoyibuyisa. Ngamnikeza ingane, kodwa kwaze kwaba yiSonto engakayibuyisi,” kusho uNojahi.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe 6 kulandela ukutholakala kwezidumbu ziboshiwe
Lona wesifazane oneminyaka engu-25 ubudala ongasebenzi, uthi wayengenankinga ukushiya ingane yakhe nomngani wakhe, futhi akasolanga lutho ngesikhathi ecela ukuhlala nengane ngoba ubejwayele ukuhla nayo.
“Sekuphele unyaka ngimazi futhi ungumakhelwane wami,” esho.
Ucingo lukaMchunu alusabanjwa manje.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Nqobile Gwala ucele noma ngabe ngubani onemininingwane ukuba axhumane noWarrant Officer SV Mhlongo ku-031 508 2330 noma ku-073 254 2512 noma afonele iCrime Stop ku-08600 10111.